Daawo: Khasaare Ba’an oo ka dhashay Qaraxii Maanta Ka dhacay Baledweyne - Hablaha Media Network
Daawo: Khasaare Ba’an oo ka dhashay Qaraxii Maanta Ka dhacay Baledweyne
HMN:- Waxaa soo baxaya faahfaahino ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo duhurnimadii maanta ka dhacay maqaaxi inta badan dadka shacab ah ay fariistaan oo ku dhaw xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada B/weyne.
Nin dhexda ku soo xirtay Jaakadaha qarxa ayaa isku qarxiyey afaafka hore ee Maqaayada, iyadoo mar kaliya ay goobtaas isu bedeshay boor iyo fara badan iyo burbur.
Ugu yaraan saddex ruux oo uu ku jiro qofkii isqarxiyey ayaa la xaqiijiyey illaa hadda iney ku naf waayeen qaraxan halka qaar kale oo badana ay ku dhaawacmeen.
Dadka dhaawacmay oo illaa 15 gaaraya ayaa loola cararay isbitaalka B/weyne waxaana ku jira saddex wariye ah oo u shaqeynayay Telefishinada Jubbaland, Saab, iyo RTN.
Ciidamada amaanka maamulka gobolka Hiiraan ayaa xiray goobta uu qaraxa ka dhacay oo lagu arkay qashin geedaha soo daatay iyo kuraas jajaban.
Qaraxan ayaa noqonaya kii labaad ee uu fuliyo qof Jaakadaha qarxa soo xirtay, Jimcihii ina dhaafay ayeyna aheyd markii qof sidan oo kale soo xirtay waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey magaalada Baydhabo, isagoo galaaftay nolosha afar qof.